TFG oo diidday shirka Nairobi - BBC News Somali
TFG oo diidday shirka Nairobi
31 Maarso 2011
Image caption Raiisalwasaaraha Somalia Maxamed Cabdullaahi iyo ergayga dowladda Britain Matt Baugh
Golaha Wasiirrada Soomaaliya ee uu Hoggaamiyo ra'iisal Wasaare, Maxamed Cabdullaahi, ayaa maanta ku gacan seyray shir uu Ergeyga Gaarka ah ee QM uu damacsanaa in uu ku qabto magaalada Nairobi bisha April.
Shalay ayuu ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM u qaabbilsan Soomaaliya, Dr. Augustine Mahiga tegey magaalada Muqdisho si uu Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra'iisal Wasaaraha ugu marti qaado shirka Nairobi, oo uu ku tilmaamay in uu yahay wada tashi, aan lahayn awood go'aan qaadasho.
Golaha Dowladdu wuxuu go'aan ku gaaray in uu 12 bilood ku darsado xilligiisa, isla markaana uu baajiyo doorashada Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka oo baarlamaanku hore go'aan ugu gaaray in la qabto bilaha August iyo July.
Xukuumaddu waxay caalamka ka codsatay in iyada looga dambeeyo go'aanka waxa laga yeelayo arrimaha Soomaaliya.
Dhanka kale, Ergeyga dowladda Britain u qaabbilsan Soomaaliya, Matt Baugh, oo fadhigiisu yahay Nairobi, ayaa maanta tegey Muqdisho, halkaas oo uu kula kulmay Ra'iisal Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi.
Dowladda Britain, ayuu Raiisal Wasaaruhu uga mahad celiyay gacanta ay ka geysato hawlaha aadminnimo ee Soomaaliya.
Hore ayuu Ergeyga Britain u booqday magaalada Garowe, ee xarunta u ah dowlad goboleedka Puntland.